Myanmar IT Resource Forum » ADMINISTRATION BOARD » » Announcement » ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ
1 ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 18th March 2010, 5:29 pm
အခုကျနော်တို့ဖိုရမ်ကနေ နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မန်ဘာများတွေ့ဆုံပွဲ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလေးတစ်ခုကို လုပ်ဖို့ ဖိုရမ်မှာဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြတာ အားလုံးအသိပါ... ပထမတုန်းကတော့ မန်ဘာများဆီကနေ ရံပုံငွေအတွက်မကောက်ခံပဲ ကျနော်တို့တစ်တွေသာ စုပြီး လုပ်ပေးမလို့ပါပဲ... ဒါပေမယ့် ထည့်ဝင်ချင်တဲ့မန်ဘာများဘက်ကနေ စဉ်းစားပေးပြီး တစ်စုတစ်စည်းထဲဖြစ်သွားအောင် (မထည့်လည်း ကိစ္စမရှိဘူးနော် လာလို့ရပါတယ်... အားလုံးကို နာမည်စာရင်းကတောင်းထားပြီးသား...) မိသားစုဖို၇မ်လေးဖြစ်သွားအောင် ခွဲခြားဆက်ဆံသလိုမဖြစ်ရအောင် ကောက်ခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး အခုလိုအတိအလင်းတရားဝင်ဖိုရမ်မှာကြေငြာလိုက်တာပါ... အလှူငွေကောက်ခံရာမှာ ကောက်ခံသူများနဲ့ ထည့်ဝင်သူများက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တွေ့ဆုံပြီး အလှူငွေကို လက်မှတ်ထိုးယူရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်... အခုရှုပ်မှနောင်ရှင်း ဆိုသလိုပါ... နောက်ပြီး နယ်တွေကလူတွေကလည်းထည့်ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါငွေလက်ခံမည့် တာဝန်ခံများဆီမှာ ဆက်သွယ်ပြီး မေးဖြင့်သာမေးမြန်းပါရန် (သိလိုသည့်အသေးစိတ်ကို) အကြံပြုပေးတာပါဗျာ... အားလုံးအတွက်စိတ်ချရအောင်ပါ... လက်ခံမယ့်သူနဲ့ အလှူငွေထည့်ဝင်သူများ စိတ်ကြိုက်ညှိနှိုင်းပြီး အလှူငွေကိုအဆင်ပြေသလို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်... ရန်ကုန်မှလူများကလည်း အောက်ပါဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာအလိုက် အဆင်ပြေသလိုဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီးထည့်ဝင်နိုင်ပါကြောင်းပါ... အလှူရှင်များစာရင်းကိုလည်း ဖိုရမ်မှာ ထည့်ဝင်ငွေနဲ့တကွ ဖော်ပြကြေငြာမှတ်တမ်းတင်သွားမှာပါ....
လိပ်စာကတော့သာကေတမှာဆိုရင် RGF အင်တာနက်ဆိုင် ရုပ်ရုင်ရုံမှတ်တိုင်မှာဆင်းပါ... ဆန်းရှိုင်းယပ်တောင်ဆိုင်ဘေးမှာ ကျနော်ဆိုင်လေးရှိပါတယ်
မြို့ထဲမှာဆိုရင် ရွှေဂုံတိုင်က Workgroup သင်တန်းကိုလာပေးလို့ရပါတယ် monday to friday morning 8:00am to 11:55 am အထိရှိပါတယ်
ဖုန်း-01 661807 ပါ(အင်တာနက်ဆိုင်မှ အကိုရီးကိုခေါ်ပေးပါလို့ ပြောပါ)၊
ကျွန်တော်အဆင်ပြေမယ့် လိပ်စာလေးတွေပြောထားမယ်နော် မြောက်ဥကလာ အဝိုင်း ။ ရုံးသစ် ။ မေဓာဝီလမ်းဆုံ ။ ဥကာ သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဈေး ။ လိုင်စင်ရုံး ။ ဘဝမြင့်
ဖုန်း - ၀၉-၅၀၄-၃၁၂၅
ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းနဲ့ ဆက်ပြီး ကျွန်တော့်နာမည်နဲ့ အလှူငွေထည့်ချင်လို့ပါ ဆိုပြီး ပြောရင် ၊ အစ်ကိုတို့ ကြိုက်တဲ့ အဆင်ပြေမယ့်နေရာကို လာပြီးတော့ ကောက်ပေးပါမယ်။ (ရန်ကုန်ဘဲနော်။ )
လောလောဆယ်တော့ ဒီ ၅ ယောက်က ငွေကောက်ခံမယ့်သူတွေပါခင်ဗျာ။ ကောက်ခံရရှိတားတာတွေကို အောက်ကဇယားမှာ ဖော်ပြပေးပါမယ်။ အသစ်တိုးတိုင်း ဒီ ဇယားမှာ Update လုပ်ပေးမှာပါခင်ဗျာ။
M.I.T.R First Anniversary ပွဲအတွက် ရံပုံငွေကောက်ခံရရှိမှာ ဇယား
Last edited by solakoko on 10th April 2010, 10:04 am; edited3times in total (Reason for editing : Update)
2 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 18th March 2010, 6:41 pm
ကျွန်တော်တို့ လောလောဆယ် အလှူငွေလက်ခံမယ့်သူ ၅ ယောက်ရှိနေပါတယ်။
အလှူငွေလက်ခံမယ့်ပုံစံကတော့ အပေါ်က ၅ ယောက်ကို ဆက်သွယ်ပါ။ ပြီးရင် သူတုိ့ လာနိုင်မယ့်နေရာကို ကိုယ်အဆင်ပြေမယ့်နေရာနဲ့ ညှိကြပါ။ ထို့နောက် Member များဘက်မှ အလှူငွေပေးသည့်အခါတွင် ကျွန်တော်တို့ ဘက်က ဖြတ်ပိုင်းပြန်ပေးပါမယ်။ Forum ပေါ်မှာလည်း ဒီ Topic မှာဘဲ ဇယားနဲ့ ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်က ၅ ယောက်က လွဲရင် ကျန်တဲ့သူများ ငွေလက်ခံခွင့်မရှိပါ။ လက်ခံမည်လည်း မဟုတ်ပါဆိုတာကိုတော့ ကြိုတင်ပြောလိုပါတယ်။
3 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 18th March 2010, 8:57 pm
အကိုလွဲဖို့စီစဉ်လိုက်ပါမယ် ပြီးရင် Message ပို့ထားပါမယ်
4 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 19th March 2010, 10:54 am
ဇယားလေး ပါ တစ်ခါတည်းတင်ထားလိုက်မယ်နော်
အခုက ရံပုံငွေက ဘယ်လောက်ရှိလို့ရှိမှန်းမသိဘူး
စီစဉ်တဲ့ သူက ရတဲ့ငွေကိုကြည့်ပြီး စီစဉ်ရမှာဆိုတော့
တစ်နေ့ ကို ရံပုံငွေဘယ်လောက်ရနေပြီဆိုတာ သိဖို့ လိုတယ်လေ
ကောက်ခံရရှိတဲ့ ငွေကိုလဲ အဆင်ပြေတာနဲ့ဒီဇယားကို Edit လုပ်ပြီး ငွေကို လာရောက်ဖော်ပြပေးကြပါလို့ ပြောပါရစေ....
ဆိုက်ကိုတော့ ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲ မသိဘူး...ဒါကတော့ ကျနော်စီစဉ်ထားတာလေးပါ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကောက်ထားတာ ငါးထောင်တော့ရပါပြီ
ပိုက်ဆံကောက်ရရင် ပိုထည့်ဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်
ဇယားကို အပေါ်ဆုံး Post မှာ ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ကိုလည်း အဲဒီ့မှာဘဲ Update လုပ်သွားပါမယ်။
Updated by $ƴǩǾ.
5 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 19th March 2010, 11:55 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 134
တညျနရော : အလုံပိတ်ထားသောနယ်
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 56
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 202
ကျွန်တော်က အလုံမှာနေတာဆိုတော့ ကို $ƴǩǾ နဲ့ အဆင်ပြေမယ့်နေရာလေးချိန်းပေးပေါ့ဗျာ။အကယ်၍အဆင်ပြေလျှင်
New User တွေအတွက် CD လေးပါယူလာပေးလို့ ရမလားဗျ။
6 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 19th March 2010, 12:01 pm
ဆိုက်ကို့ ဆီကို မေးလ် ပို့ ပြီး အကိုအားမဲ့ရက်နဲ့ဆိုက်ကို အားမဲ့ ရက် ညှိပြီး
ပြီးရင် အတိအကျ ကျနော်တို့ တင်ပြပေးပါ့မယ်
7 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 19th March 2010, 4:45 pm
zawmin wrote: ကျွန်တော်က အလုံမှာနေတာဆိုတော့ ကို $ƴǩǾ နဲ့ အဆင်ပြေမယ့်နေရာလေးချိန်းပေးပေါ့ဗျာ။အကယ်၍အဆင်ပြေလျှင်
ကျွန်တော့် စာမေးပွဲက တအားကပ်နေပြီ။ ကျွန်တော် ဒီနေ့ဘဲ Online လာတာဗျ။
အလှူငွေကိုလဲ စာမေးပွဲအပြီး April ၅ ရက်နေ့ညနေမှာ လက်ခံပေးပါမယ်။ အခွေလည်း ယူလာပေးမယ်။
အော် ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အလုံ ကပါ။
8 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 20th March 2010, 7:51 am
အာဒါဆိုပို ကောင်းတာပေါ့။ဘယ်လမ်း။အိမ်နံပါတ် လေးပေးလိုက်ပါ။အစ်ကိုရှိတဲ့နေ့ ဆိုရင်လာပေးပါ့ မယ်။
ကျွန်တော့် Phone:095075479 ပါ။သစ်တောလမ်းမှာနေပါတယ်။
9 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 21st March 2010, 2:33 pm
စာရင်းထဲ နာ့ဘာသာနာ ၀င်ဖြည့်လိုက်တယ်... ဘာရမလဲ နာတွ....
10 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 21st March 2010, 2:37 pm
ကို မားစ် က စာရင်း တော့ထည့်ပြီး ဟိုဟာကျနော့ မဖြည့်သွားဘူးလား..(ငွေ)
11 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 21st March 2010, 7:08 pm
ပေးမှမပေးရသေးတာလို့.... ကောက်မယ့်သူရှိရင်ပေးမယ်လေ... ဒီကိုလာကောက်... စတာနော်... ကျနော်ဒီတစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း ပေးဖို့အတွက် စီစဉ်ထားပါတယ်... ကျနော့်ညီကပေးဖို့အတွက် ဆက်သွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်.... နောက်ပြီးကျနော့်အစား သူလာလိမ့်မယ်... သူ့က ကွန်ပြူတာပိုင်းမှာ နည်းနည်းအားနည်းတယ်... တခြားသိပ်နားမလည်ဘူး... Game ကလွဲရင်ပေ့ါ... အဲဒါ သူ့ကို နှစ်ပတ်လည်ပွဲတတ်စေချင်တာကလည်း ရင်းနှီးမှုရအောင်ပါ... ဟောပြောပွဲပုံလေးပါပါမယ်ဆိုတော့ နားယဉ်သွားအောင်လည်းပါပါတယ်ဗျာ.... အော်သူ့နာမည်က ကျော်သူဝင်း လို့ခေါ်ပါတယ်... ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အလှူငွေသူကပေးတော့မှပဲ စာရင်းထဲထည့်လိုက်နော်... ဟီး
12 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 22nd March 2010, 4:31 pm
အလှူငွေကို ဒီအခုလာမယ့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေထဲက တစ်ရက်ရက်လောက် ကောက်ခံပေးပါလား... ကျနော့်ညီတော်မောင်လာပြီးပေးမလို့.... အဆင်ပြေမယ့် တစ်ယောက်ယောက်လက်ခံပေးပါလို့... လက်ခံမယ့်သူက လာမယ့်အချိန်နဲ့နေရာလေးကိုလည်းပြောပါဦးနော်.... နေရာကတော့ Tokyo Donuts က အကောင်းဆုံးပဲနဲ့တူတယ်... အချိန်ကတော့ အဆင်ပြေမယ့်အချိန်ကိုရေးပေးပါနော်... အလှူငွေက တကယ်မပေးရသေးလို့ အရောင်လေးမထည့်သေးဘူး... ကောက်ခံရရှိသူပြင်ပေးပါနော်..
13 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 22nd March 2010, 4:57 pm
ကိုမားစ် ရဲ့ အလှူငွေ ဘယ်သူကောက်ပေးမလဲ ဟင်..
ဘူမှ မအားရင် တော့ ကျနော်ပဲ လာလိုက်ပါ့မယ်ဗျာ.....
14 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 22nd March 2010, 5:12 pm
ကျနော်အလှူငွေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စကို ကျနော် ကြာသပတေးနေ့နောက်ဆုံးထားပြီး စောင့်နေပါ့မယ်... နေ့တိုင်းလည်း ဖိုရမ်မှာရှိနေမှာပါ... အဲဒိကျရင်တော့ လာယူမယ့်သူနဲ့ ကြာသပတေးနေ့ကျရင် သေသေချာချာ Gtalk မှာပြောပါ့မယ်... အခုကတော့ လူစောင့်လိုက်ဦးမယ်... လောလောဆယ် ကိုဆိုလာရဲ့ mail ကို ကျနော် add ထားတယ်နော်.... နောက်ဆုံးအဆင်ပြေမယ့်သူမရှိရင် ကိုဆိုလာစကားအတိုင်းပဲ ကြာသပတေးနေ့ကျရင်ပြောမယ်လေ....
15 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 22nd March 2010, 6:05 pm
အကိုရေ ကျွန်တော်ကတော့ အားဘူးဗျ ။ ကျွန်တော်ဆီကို လာပေးနိုင်ရင်တော့ အဆင်ပြေမယ် ။
ကျွန်တော်လာမယူပေးနိုင်တာကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဗျာ ။ တကယ်မအားလို့ပါ ။
ကျွန်တော်ဆီကို လာပေးချင်တယ်ဆိုရင် မြို့ထဲကနေ ၃၅ စီးလာပါ ၊ သာကေတ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ဆင်းပါ ။
ပြီးရင် တည့်တည့်လျှောက်လာပါ ။ ဓါတ်တိုင် ၃ တိုင်မြောက်ဆို ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုရောက်ပါပြီ ။ ကျွန်တော်ဆိုင်
နာမည်က RGF အင်တာနက်ဆိုင်ပါ ။ ဘေးမှာ ဆန်းရှိုင်းယပ်တောင်ဆိုင် ရှိပါတယ် ။
gmail က [You must be registered and logged in to see this link.] ပါ ။
16 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 25th March 2010, 4:27 pm
ကဲ... ကိုဆိုလာရေ... အကိုပဲသွားယူလိုက်တော့နော်... တိုကျိုဒိုးနပ်မှာပဲလေ... အချိန်တွေ ဘယ်လိုအ၀တ်အစားဝတ်လာမှာတွေ စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ.. လိုအပ်သည်များကို ကျနော့်ညီရဲ့မေးကိုပို့ပေးပြီး နှစ်ယောက်သားဆက်သွယ် ပြီး အလှူငွေလက်ခံဖို့ကိစ္စကို လုပ်လိုက်ကြပါတော့နော်... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဆိုလာ....
17 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 25th March 2010, 4:31 pm
မောင်ကျော်သူဝင်း နဲ့ အချိန် တိုက်ထားလိုက်ပါ့မယ်
Last edited by solakoko on 27th March 2010, 5:27 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : ဒီနေ့27.3.2010 က ရခဲ့တယ် ko mars ရေ)
18 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 2nd April 2010, 2:20 pm
ကဲဗျာ...၅ ရက်နေ့ တောင် နီးလာပြီ.....
ဘယ်မှာ ချိန်းမှာလဲဗျာ..$ƴǩǾ ရေ..ပြောအုံးလေ...
အန်န၀ါ ရိပ်သာမှာဆိုတော့ နီးနီးနားနားလည်းရတယ်ဗျာ...
ဒါမှမဟုတ် အိမ်ကိုလာပေးဆိုလည်း လာပေးပါ့မယ်.
19 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 2nd April 2010, 3:59 pm
ဆိုက်ကို က (၆)ရက်နေ့ မှ အားမှာလားမသိဘူး..
20 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 5th April 2010, 9:58 pm
ကို ဇော်မင်း ခင်ဗျာ.
ကျွန်တော် စာမေးပွဲနဲ့ဆိုတော့ စာမပြန်မိတာ တောင်းပန်ပါတယ်။
၈ ရက်နေ့တော့ ကျွန်တော်အားတယ်။ အချိန်ကို ပြန်ငြှိတာပေါ့။
21 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 6th April 2010, 9:17 am
အလုံ ရဲစခန်း ရှေ့ က ရွှေကျားမင်း လက်ဖက်ရည် ဆိုင် မှာ 7:40 PM လောက် အရောက်လာခဲ့လိုက်ပါ.....
22 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 6th April 2010, 10:00 pm
zawmin wrote: အလုံ ရဲစခန်း ရှေ့ က ရွှေကျားမင်း လက်ဖက်ရည် ဆိုင် မှာ 7:40 PM လောက် အရောက်လာခဲ့လိုက်ပါ.....
မနက် ၉ နာရီ ၁၀ နာရီလောက်
23 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 7th April 2010, 6:10 pm
မနက်ခင်းက သင်တန်းတွေရှိတယ်ဗျ.....ဒါဆိုလည်း ကိုဆိုက်ကို ဘဲ ညှိတော့ဗျာ.....ကျွန်တော်တို့ ဘဲလာပေးလိုက်ပါ့မယ်..
24 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 7th April 2010, 6:52 pm
zawmin wrote: မနက်ခင်းက သင်တန်းတွေရှိတယ်ဗျ.....ဒါဆိုလည်း ကိုဆိုက်ကို ဘဲ ညှိတော့ဗျာ.....ကျွန်တော်တို့ ဘဲလာပေးလိုက်ပါ့မယ်..
အဲလိုတော့ မလုပ်နဲ့လေ။ သင်တန်းတော့ အပျက်မခံပါနဲ့၊ လောလောဆယ်က ကျွန်တော်က အားနေတဲ့သူဆိုတော့ ကျွန်တော်ကအဆင်ပြေတယ်။
ညပိုင်းကတော့ အဲဘက် မရောက်တော့လို့။
အစ်ကိုတို့လည်း သင်တန်းမဖျက်ရဘူး ၊ အဆင်လည်းပြေမယ်ဆိုရင်တော့ မနက် ၁၀ နာရီလောက် ကျွန်တော်လာယူပေးမယ်။ (အဲအချိန်က ကျွန်တော့် ကောင်မလေးဆီ လာစရာလည်းရှိလို့။ )
25 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 7th April 2010, 6:55 pm
ဒါဆိုလည်းဗျာ.....၉ ရက်နေ့မနက် ပိုင်းပေါ့ဗျာ.....၁၀ လောက် ရွှေကျားမင်းမှာပါ.
26 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 7th April 2010, 7:03 pm
အဲ။ ၈ ရက်နေ့ ဟုတ်ဝူးလား။
ကျွန်တော် ၉ ရက်နေ့ အိမ် အလုပ်လုပ်ရမှာ။.
27 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 7th April 2010, 8:56 pm
ကျွန်တော်တို့ သောကြာနေ့က Tokyo Donut မှာ ညနေ ၅ နာရီကနေ ၇ ခွဲလောက်ထိ အစည်းအဝေးရှိတယ်၊ အဲဒီ့ကိုအဆင်ပြေရင်လာခဲ့ပါလား။
ဟို ချိန်း ၊ ဒီ ချိန်း လုပ်တယ်တော့ မထင်ပါနဲ့နော် ကျွန်တော်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး အချိန်တွေ ရွှေ့ပြီး ငြှိကြည့်နေလို့ပါ။
28 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 8th April 2010, 12:09 pm
ကိုဆိုက်ကို ကျတော်သေကြာနေအစည်းအဝေးမှာ ပေးပါမယ်
ညနေငါးနာရီခွဲလောက်လာခဲ့ပါမယ် အဲမှာမှ ငွေကိုင်တွေနဲံ အလှုငွေထည့်ချင်တဲ့ သူတွေကို ချိန်းလိုက်တာ
29 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 8th April 2010, 12:16 pm
ဟာ လွဲ ပြန်ပြီပေါ့ဗျာ.....သင်တန်းရှိသေးတယ်ဗျ...
8:00PM နာရီမှပြီးမှာ ဗျ...တော်တော်ကြီးကို ကီးမကိုက်ဘူးဗျာ...
ကျွန်တော် တို့ကသင်တန်းတွေများနေတယ်ဗျ....ဒီလိုလုပ်ဗျာ....
ဆိုက်ကို မရှိရင်လည်း သူအိမ် ကတစ်ယောက်ယောက်......ဒါမှမဟုတ် အန်န၀ါ၇ိပ်သာက တစ်ယောက်ယောက်ပေါ့ဗျာ
ကျွန်တော်တို့ လာပေးလိုက်ပါ့မယ်.....အဲ့ဒီဘက်ကို ညတိုင်းလိုလို လမ်းလျှောက် ထွက်ကြတယ်..သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပါ
30 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 9th April 2010, 9:21 pm
zawmin wrote: ဟာ လွဲ ပြန်ပြီပေါ့ဗျာ.....သင်တန်းရှိသေးတယ်ဗျ...
နက်ဖြန် စနေကော ဘယ်အချိန်အားလဲဟင်။
ကျွန်တော့်အိမ်လာပေးမယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားနာလို့။
အစ်ကို့အိမ်လိပ်စာပေးလေ။ ကျွန်တော် လာယူပေးမယ်။
နက်ဖြန်ဆို လိုအပ်တာတွေ ၀ယ်တော့ ၀ယ်တော့မှာ။
31 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 10th April 2010, 10:19 am
ဆောရီး ဗျာ....နောက်တစ်ခါပေါ့ ဗျာ...အခုတော့ ကျွန်တော် ခရီးသွားနေပြီဗျ..ဒါတောင် လမ်းမှာ ခဏ နားတုန်းတွေ့ ရာဆိုင်ဝင်ရေးလိုက်တာ
32 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ on 22nd January 2011, 7:55 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2011-01-22
သီးသန်ရံပုံငွေ အလှူငွေမကောက်ခံဘူးလား ဆိုက်ကလေးတိုးတကဖို့အတွက်လေ
33 Re: ရံပုံငွေကိစ္စများဆိုင်ရာ